मेरो नाम पैसा । म मेरो परिवारको सबैभन्दा कान्छो छोरा म देखि तल पनि दुई भाइ थिए तर ‘इन्फ्लेसन’ को महामारीले उनीहरुलाई लग्यो । उनीहरुसँगैका अरु दुई बहिनी पनि छन् तर धेरै हल्ला गर्ने हुनाले उनीहरुलाई खासै कसैले रुचाउँदैनन् । यिनै भान्टाङ्ग, भुन्टुङ्गलाई सँगालेरनै मेरो हजुरबुबा त्यस्तो अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ । मेरो रुपको कुरा गर्नुहुन्छ भने म हेर्दा सानो चिटिक्क परेको चौरीको फोटो भएको एउटा रातो रातो देखिने कागज मात्रै हुँ तर म नपुगेका ठाउँ छैन । मेरो हजुरबुबामा त झन हात्तीको फोटो छ तर पनि उहाँ सबैतिर पुग्नु भएको छैन । कतिपय मानिसले त उहाँलाई आजसम्म देखेको पनि छैनन् रे ! मेरो हजुरबुबा बडो गर्वका साथ भन्नुहुन्छ सबै मानिसले मलाई आफ्नो साथ राख्न खोज्छन् मेरै मात्र सपना देख्छन् । मलाई पाउनका लागि मान्छे के के मात्र गर्दैनन्, घण्टौं घण्टा लाइन बसेर भगवानको दर्शन गर्छन् र मेरै प्राप्तिको कामना गर्छन् । हामी पुर्खौ पुर्खादेखि राजा मानदेवलाईनै पुज्छौंँ किनकी उनैकै पालामा हाम्रो वंशको जन्म भएको थियो । धनका राजा कुँवेर र धनकी देवी लक्ष्मी भनेर मानव जगतमा कहलिए पनि हामी पैसा जगतमा राजा मानदेवलाई खुब मान्छौं ।
हाम्रो पैसा जगतमा एउटा उखान साह्रै चर्चित छ ‘पैसाको जात, यसका लागि मान्छे मर्छन् पनि र मार्छन् पनि’ । हामी साथी भाइ कहिल्यै काँहि बसेर कुरा गछौं अचम्मकै छ रे यो मानव जगत ! जुवाको खालमा भेट हुँदा मेरो हजुरबुबा र उहाँका साथीहरु बसेर जुवाडेहरुको गफ सुन्नुहुन्छ रे अनि आफै आफै रमाउनु हुन्छ रे । हिजो त एउटा जुवाडेले भनेको सुनें हैं, मलाइ त उसले अब स्वीस बैंक लाने रे बुझिस् ! अझ अर्को जुवाडे के भन्थ्यो थाहा छ ? उ मेरा साथीहरुलाई ‘यती’ को जिम्मा लाउँछ रे कस्तो राज हुँदो रहेछ, हाम्रो त मानव संसारमा भनेर हजुरबुबा रमाइरहनु भएको थियो ।
भन्न त दुई आत्माको मिलन भन्छन् तर त्यो आत्मा भित्र पनि सुशुप्त रुपमा बसेकै हुन्छ पैसा । दाइजो नपुगेको निहुँमा लोग्नेले राता रात स्वास्नीलाई आगो लगाएको, अंशको निहुँमा छोराले आफ्नै बुबाको हत्या गरेको आदि समाचार आजभोली छ्याप्प छ्याप्ती आउँछन् । म पैसा मेरो जात नै यस्तो । हाम्रो उपस्थितिमा पनि मान्छे मात्तिन्छन्, अनुपस्थितमा झन बहुलाउँछन् नै । हाम्रो अनुपस्थितिमा त मान्छेको स्तरनै घट्दो रहेछ । त्यस्ता मान्छेलाई गरिब भनिदो रहेछ । त्यस्ता मान्छेको कोटीमा पर्न जान्छन्, जो सडक पेटीमा सुत्छन्, जो एकछाक मात्र भात खाई जसोतसो बाँचिरहेछन्, र जो ऋणले चुर्लुम्म डुबेर आत्महत्याको बाटो रोज्छन् ।
हाम्रो स्थायी उपस्थितिले त फेरि मान्छेको स्तर बढेर उ आफुलाई राजानै ठान्दो रहेछ । महल जस्तो घरमा बसेर लग्जरीर्यस लाइफ स्टायल बिताएर फोरेन भ्याकेशनमा रमाएर बाफ्रे ! त्यस्ता मानिसको फेरि शान नै बेग्लै, खल्तीमा चेकबुक बोकेर हिड्छन् । ‘बड्डे लोग, बड्डी बातेँ’ ।
हाम्रो अस्थायी उपस्थिति भएकालाई फेरि मिडल क्लासको दर्जा दिईएको रहेछ । त्यस्ता मान्छेमा चाँहि मेरो महत्व म हुँदा घट्छ, नहुँदा बढ्छ ‘जो होगा देखा जायगा’ टाइपको । यस्ता परिवारमा बचत धेरै हुँदैन र एकदमै अभाव परेको बेलामा जसोतसो पैसाको बन्दोबस्त हुन्छनै तर यहाँ द्धन्द चाँहि साह्रै हुन्छ । ऊ भन्दा म धनी म सम्पन्न त्यसलाई कसरी तल पा¥यौं, कसरी खुट्टा तानौं भन्ने मात्र सोच हुन्छ । कहिले काँहि त यस्तो लाग्छ की मान्छे मान्छे बीचको द्धन्द, घर झगडा सबै मैले गर्दा भएको हो । म नहुँदो हुँ त धनी र गरिब भनेर मान्छेको स्तर तोकिने थिएन । एउटा सज्जनको मुखबाट पिस ब्रिङ्स मनी मेक्स वार भनेको सुनेको थिएँ । अहिले सम्झि ल्याउँदा हो जस्तो लाग्छ ।
रीया जीवन भन्दा गाउँले जीवन राम्रो भन्ने मैले सुनेको थिएँ तर गाउँमा जति दर्दनाक जीवन कता पो होला र ? दिनारको भाउँ आकाशिएर हो या नेपाली जीवन सस्तिएर हो गाउँका नव–जवानहरु १८ वर्ष कटेपछि खाडीतिर भाँसिदा रहेछन् पैसाको खातिर । मान्छे आफ्नो किड्नी बेच्न बाध्य हुनछन् पैसाकाृ निम्त्ति बाध्यता र मजबुरीको मुख हेर्दा हेर्दै अहिले कुनैपनि अपराधको पछाडि पैसाको आवश्यकताले भन्ने कारणहरु भेटिन्छन् । शहरमा अहिले देहव्यापार निकैनै फस्टाएको छ । हालसालै गरिएको अनुसन्धानले शहरमा पुरुष यौनकर्मीको संख्या महिला यौनकर्मीको तुलनामा अलि धेरैनै पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा गाँस, बास, कपास र सहवासनै ‘बेसिक निड’ हुन् भन्दा गलत नहोला । मान्छेको आवश्यकता पुरा गर्ने माध्यम पैसाको कति मानिसलाई लालच देखाएर अपराध गर्नमा बाध्य बनाएको छ । पहिलो अपराध सायद मजबुरी हुन सक्छ तर पटक पटकको अपराध पैसाको लाचमा हुने गर्छ ।
भविष्यका कर्णधारहरु कुनै बारुद कारखानामा पटका बनाउँदै भेटिन्छन् । राष्ट्रवादीहरुलाई कठघराभित्र भेटिन्छन् । कसैलाई दुर्घटनामा पारी मारिन्छ भने कसैलाई देश द्रोहीको आरोपमा झुण्डाईन्छ । सेता नम्वर प्लेट भएका गाडीहरु कोठी र जुवा खाल अगाडि नो पार्किङ्गमा पार्क गरिएको भेटिन्छन् । धनी धनाढ्यहरु पैसा तिरेर फिटनेश सेन्टरमा गएर पसिना बगाएर नखाई नखाई फिट रहन्छन् भने गरिबहरु खान नपाएर र पोलियो जस्ता अनेकौं रोगका शिकार बन्छन् । संसार अहिले जुन गतिमा अघि बढिरहेको छ त्यो सबै पैसाको निम्त्ति हो । नाता जोडिन्छन् पैसाले, आफन्त टाढिन्छन् पैसाले । करोडपतिको घरमा पैसाको अतिवृष्टि हुन्छ, रोडपतिको छतमा अभावको अतिवृष्टि हुन्छ ।
मान्छे जहाँ गएपनि ठोकिन्छ एकै ठाउँमा जहाँ पैसा छ । हामी पैसा ‘निर्जिव छौं तैपनि यहाँ मानिसको सास हामीमै अड्केको छ । पैसाले मानिसलाई लामो आयु दिन्छ र त्यहि पैसाले भ्रुण हत्या समेत गराउँछ ।